Qaaciddadan xoogga leh waxay dishaa dhammaan caabuqyada waxayna dib u soo celisaa caafimaadka - AFRIKHEPRI
Foornada noocan ah waxay dishaa dhammaan cudurada waxayna dib u soo celisaa caafimaadka
jimcaha, Julaay 10, 2020
Honey iyo turmeric
LQaaciddadiisa aasaasiga ah ee xoogani xoogaysani waxay dib uga bilaabmaysay Yurubta dhexe, taasi waa, ilaa wakhtigii dadku ay la soo gudboonaadeen nooc kasta oo cuduro iyo cuduro faafa ah.
Qalabkani wuxu dhab ahaantii yahay antibiyootiko oo dila bakteeriyada Gram-positive iyo Gram-negative. Waxa kale oo ay leedahay cufur xoog leh oo liddi ku ah fayruska iyo antifungal, waxay kordhisaa wareegga dhiigga iyo socodka lenfiga dhammaan qaybaha jirka. Dhibaatada daawada geedi-socodka ah waa doorashada ugu fiican ee la dagaallanka candida.
Qalabkani wuxuu caawiyay dad badan oo ka bogsada cudurro fayrus ah, bakteeriyo, xashiishad iyo fungal iyo xitaa cudurka! Awooddeeda waa in aan la yareeynin.
Waxay bogsiin kartaa cuduro daba-dheeraada ama cudurro daran. Waxay kicisaa xuubka dhiigga waxayna nadiifisaa dhiigga. Qaaciddadani waxay ka caawisay malaayiin dad ah qarniyo badan oo ka soo horjeeda cudurrada ugu dhimashada badan. Qarsoodigu wuxuu ku jiraa isku dhafka xooggan ee waxyaabaha dabiiciga ah ee tayo sare leh iyo cusub!
Si loo soo koobo, tafsiirtan ayaa waxtar u leh daaweynta dhammaan cudurrada, si guul leh u xoojiya nidaamka difaaca, waxay u dhaqmaan sida fayruska, bakteeriyada, antifungal iyo antiparasitic. Waxay ka mid tahay caawimaad aad u weyn infekshanada ugu daran.
Xoojinta cunto kariska
Waxaad xiran kartaa gacmo gashi inta lagu jiro diyaarinta, gaar ahaan markaad taabato basbaaska, maaddaama xoqidda gacmaha ay adag tahay in la qaado. Iska ilaali, urkooduna aad ayuu u xoog badan yahay waxayna kicin kartaa sinaha isla markiiba.
700 ml oo ah khudaar cider tufaax (marwalba isticmaal organic)
1 / 4 koob oo toon ah oo la jarjarey
Koobka 1 / 4 ee basasha jar jartey
2 basbaaska cusub, kan ugu xooggan ee aad ka heli karto (taxaddar markaad nadiifinayso, xiro galoofyada !!!)
1 / 4 koobab shiidan
Shaxda 2 waxay daadiyeen fargeetada
2 miisaan qadhaadh ama laba qaybood oo rooti ah
Dhammaan waxyaalaha maaddada ku jirta baaquli oo isku dar, marka laga reebo khal.
Isku wareeji walxaha dhexdiisa.
Ku shub tufaax cider tufaax oo buuxa. Waxa ugu fiican haddii weelku ka kooban yahay 2 / 3 maaddooyinka qallalan, kuna buuxi qashinka.
Si fiican u walaaq oo walaaq.
Dhalada ku hay meel qabow, qalalan toddobaadyo 2. Si fiican u walaaq dhawr jeer maalintii.
Ka dib maalmaha 14, u gudub isku dar ah colour ama ka wanaagsan, ku dar faashad si ay u soo saaraan casiir.
Isticmaal cuntada kale ee qalalan ee diyaarinta cuntada.
Qalabayntaada ayaa diyaar u ah isticmaalka. Uma baahnid inaad ku hayso qaboojiyaha. Waxay qaadan doontaa waqti dheer.
Calaamad dheeraad ah: waxaad sidoo kale u isticmaali kartaa jikada - ku dar saliid yar oo saliid ah oo u isticmaal sida dharka salad ama saliidaada.
Fiiri: dhadhanka waa mid aad u xoog badan!
Tilmaamo dheeraad ah: Cun jeex jilicsan, liin ama lime kaddib marka aad qaadatid xoogeeyaha si loo yareeyo dareenka gubashada.
Gargeli afkaaga iyo liqitaan.
Ha ku maydhin biyaha maxaa yeelay taasi waxay yareyneysaa saameynta.
Qaado jaantuska 1 maalin kasta si kor loogu qaado habka difaaca jirka lana dagaallamo qabowga.
Kordhin xaddiga maalintiiba ilaa aad ka gaarto qiyaasta muraayadda dhalada ah maalin kasta.
Haddii aad la dagaalameyso jirro khatar ah ama infakshan, qaado qaado ah 5-6 maalgeliye hal mar maalintii.
Ammaan ayay u tahay haweenka uurka leh iyo carruurta (isticmaal qadar yar), sababtoo ah maaddooyinka dabiiciga ah oo aan ku jirin sunta.
Garlic waa antibiotic awood leh oo leh faa'iidooyin badan oo kala duwan. Si ka duwan sida antibiyootikada kiimikada ee dila malaayiin bakteeriya ah oo jirkaagu u baahan yahay, waxay bartilmaameed u tahay bakteeriyada cudurada iyo jeermiska. Garlic sidoo kale wuxuu kiciyaa oo kordhiyaa qiyaasta bakteeriyada caafimaad leh. Waa wakiil antifungal awood ah oo burburiya antigen walba, pathogen, iyo jeermiska cudurada pathogenic.
basasha waa qaraabada ugu dhow ee toonta oo leh wax la mid ah, laakiin tallaabo sahlan. Wadajir, waxay abuurayaan labalaab xoog leh.
Horserad waa dhir xoog leh, waxtar u ah cudurada sambabada iyo sanbabada. Waxay u furan tahay wadnaha sanka iyo kicinta wareegga halkaasoo hargab iyo hargab caadi ahaan ay bilaabmaan, maadaama ay takhaatiirta intooda badani dhihi lahaayeen.
Ginger waa hanti aad u firfircoon oo ka hortag ah oo waa kiciye weyn ee wareegga.
Maareyntu waa kiciyaasha ugu awoodda badan wareegga. Qalabka daawada antibiyootikadu waxay u dhaqmaan meesha kaliya xaaladaha cudurka pathogenic.
Turmeric waa bahalka ugu haboon, waxay nadiifisaa infekshinka waxayna yaraynaysaa bararka. Waxay ka hortagtaa koritaanka kansarka waxayna ka hortagtaa waallida. Waxay si gaar ah faa'iido u leedahay kuwa ku xanuunsan xanuunka wadaagga ah.
Khaliijka cider - Waa inay jiraan wax aad u caafimaad ee la isticmaalayo oo khal cider tufaax sida aabbe u ahaa daawooyinka, Hippocrates waxaa loo isticmaalaa in lagu 400 sano BC sababta oo ah guryaha bogsiinta ay. Waxaa la sheegay in uu kaliya isticmaalo laba daaweyn: malab iyo tufaax cider khab. Apple oo khal cider waxaa laga sameeyey tufaax soo riddo ka dibna si cajiib leh iyo maraan habka adag in la siiyo alaabta final. Apple oo khal cider ku jira klorofyll, fiber a in yaraynaysaa kolestaroolka xun oo dejisa cadaadiska dhiigga.
Khubarada caafimaadku waxay isku raaceen in dadku u baahan yihiin kaalshiyam badan markay weynaadaan. Khudaarta waxay ka caawisaa ka soo saar kaalshiyamka cunnooyinka ay ka kooban tahay, taas oo gacan ka geysaneysa habka loo joogteeyo xoogga lafaha. Yaraanta potassium waxay sababi kartaa dhibaatooyin kala duwan, oo ay ku jiraan timo lumis, ciddiyaha oo engagan iyo ilkaha oo jilicsan, sanka iyo sanka oo duulan. Khalkii tufaaxa tufaaxa ee qulqulaya ayaa hodan ku ah potassium. Daraasado la sameeyay ayaa muujinaya in yaraanta beeruhu ay sababto koritaan gaabis ah. Dhibaatooyinkaas oo dhan waa laga fogaan karaa haddii aad si joogto ah u istcimaalo khal tufaax ah. Kaliumpermanganat waxay waliba jirka ka saaraa wasakhda sunta ah.
Beta-carotene waxay ka hortagtaa waxyeelada ay keento xagjirnimada bilaashka ah, waxay ku hayaan shirkada maqaarka iyo dhalinyarada. Khamriga khudradda cagaaran wuxuu u fiican yahay kuwa doonaya in ay lumiyaan miisaanka.
Waxay jabisaa dufanka, kaas oo taageera geedi socodka dabiiciga ah ee miisaan lumis. Qalabka cider-ka ah ee caleenta ah wuxuu ka kooban yahay malic acid, waxtar u leh dagaalka ka dhanka ah fungal iyo infekshannada bakteeriyada. Caddadani waxay dillaacdaa kaydadka uric-ka ee ka dhasha agagaarka xaglaha, sidaas awgeedna waxay yareyneysaa xanuunka wadarta. Sonkorta bacdi ka dib ayaa laga saarayaa jirka.
Waxaa la rumeysan yahay in khal cider tufaax waa muhiim in daaweynta dhibaatooyinka sida caloosha oo, madax xanuun, arthritis, tabar lafta, saxarada, subagga, shuban, cambaarta, indho cuncun , daal chronic, cuntada lagu sumoobo khafiif ah, timo, dhiig karka, cayilka, iyo dhibaatooyin kale oo badan oo caafimaad.
Xoojinta Tani waa isku dhafka ugu wanaagsan ee la dagaallanka mid walbaba. Ilaali caafimaadkaaga adigoo isticmaalaya antibiotics dabiici ah.
Curcumaxx dheeraad ah oo xoog leh - 750 ml
5 cusub oo ka yimid 37,50 €
Iibso 37,50 €
ilaa Luulyo 9, 2020 7:35
Soosaaray la kariyey ee turmeric dheeraad ah oo ah 95% curcumin lagu daray basbaas
Warshadani Afrikaan waxay daaweyn doontaa Cudurka Alzheimer, Cudurka Parkinson ama Stroke Outbreaks
Sirta ugu weyn - David Icke (PDF)